विपन्न, गरिब र असाहायहरुलाई कर्म सञ्चालनका लागि निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ ःअध्यक्ष, भण्डारेश्वर धार्मिक सेवा समिति – इ – डायरी एक्सप्रेस
विपन्न, गरिब र असाहायहरुलाई कर्म सञ्चालनका लागि निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ ःअध्यक्ष, भण्डारेश्वर धार्मिक सेवा समिति
रमेश महर्जन, अध्यक्ष, भण्डारेश्वर धार्मिक सेवा समिति
० तपाई भण्डारेश्वर धार्मिक सेवा समितिका अध्यक्ष हुनुुहन्छ । सुरुआतमा यो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा कसरी जागृत भयो ?
भण्डारेश्वर एक मुखे शिवको मन्दिर हो । यो रुद्रमतिको बगलमा रहेको छ । यो अलिक उचाईमा भएको हुँदा वि.स.२०४३ सालको बाढीले केहि भाग बगाएर लगेको थियो । त्यसपछि मन्दिरको संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी भयो । त्यसलाई संरक्षण गर्ने क्रममा यो संस्थाको सुरुवात भएको हो । यो समितिले विपन्न, गरिब र असाहायहरुलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गरेको क्रियापुत्री भवनमा यो सुबिधा प्राप्त छैन । त्यसैले पशुपति क्षेत्रबाट भद्र भलाद्मीहरुले बिपन्न, गरिब र असाहायहरु भण्डारेश्वर धार्मिक सेवा समितिमा कर्म सञ्चालन गर्न पठाउने गर्नुहुन्छ । त्यसका निमित्त हामीले सहजिकरण गर्दै आएका छौं ।
० अहिले मन्दिर रहेको ठाउँको क्षेत्रफल कति छ ?
यो साढे दुई रोपनी जग्गामा छ ।
० यो मन्दिरमा जनताले पाउने सेवाहरु के के छन् ?
यो समितिले राज्यसँग समन्वय गरेर यहाँ निर्माणका कामहरु पनि गरेको छ । यसरी यो समितिले धार्मिक क्षेत्र संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको हो र समाजलाई सहजिकरणका लागि क्रियापुत्री भवनको निर्माण गरेको छ । जसबाट स्थानीय हरुलाई ठूलो राहत हुन पुगेको छ ।
० यो भवन वार्षिक रुपमा कति जनाले प्रयोग गरेको पाईन्छ ?
लकडाउनको अवधिमा तीन महिनाका लागि बन्द नै गरियो । किनभने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन जरुरी नै थियो । तथापि अन्य समयमा निरन्तर रुपमा नै चलाएका छौं । एक वर्षको अवधिमा २०७५ साल वैशाख देखि चैत्र सम्मको १२ महिनाको अवधिमा २२१ जनले सेवा लिएका छन् ।
० यो भवनको संरचना निर्माणका लागि कति खर्च भयो र स्रोतहरु के–के हुन् ?
हामीले सबै संरचनाहरु स्थानीयकै पहलमा निर्माण गरेका हौं । राज्यबाट मात्रै मात्रै साढे दुई लाख रुपैया प्राप्त भएको थियो ।
० यहाँ बढि मानिसहरु जमघट हुने अवस्था रहन्छ र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सुरक्षाका उपयाहरु के अप्नाउनुभएको छ ?
हामी यहाँ सबैलाई सामाजिक दूरी कायम गराउन अनुरोध गरेका छौं । साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर, मास्क र पन्जा लगाउन अनुरोध गरिएको छ । साथै यहाँ प्रयोग हुने ब्लांकेटहरु एक जनाले प्रयोग गरिसकेपछि पुनः सफाई गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न दिने गरेका छौं । यसरी यहाँ क्रियाकर्म गर्नेहरुका निमित्त १३ दिनसम्म नै यहि प्रक्रियाले सजगता अप्नाउने गरिन्छ ।
० अहिले यस खालको पुरातात्विक महत्वका मन्दिरहरु संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारको पनि सहयोग गरेको पाईन्छ । यहाँको अवस्था कस्तो छ ?
हामी स्थानीय सरकारको सहयोग बिना चल्नै सक्तैनौं । स्वाभाविकै रुपमा ‘माटोको भर ढुंगा र ढुंगाको भर माटो’ हुनै पर्दछ । हाम्रो यो विशुद्ध सामाजिक संस्था नै हो । यसले सधै समाजको हितमा काम गर्दछ । स्थानीय सरकारले पनि संरक्षण गरिरहेको छ ।
० यो पशुपति क्षेत्र भएका कारण पनि क्रियापुत्रीहरुलाई यहाँ बाँदरले पनि दुःख दिने गरेको देखिन्छ । कसरी व्यवस्थापन गरिरहँनु भएको छ ?
वास्तवमा हाम्रा पुर्खा नै बाँदर थिए भन्ने हामी अध्ययन गरेर आएका हौं । यहाँको रुद्रमति भन्ने सिफल क्षेत्र नै बाँदरको बासस्थान मानिन्छ । हामी उनीहरुको क्षेत्रमा आएर बसेका छौं । मानव बस्तीले त उनीहरुको बासस्थान पो अतिक्रमण पो गरेको हो । त्यसैले उनीहरुले हामीलाई बिथोल्न खोज्नु त स्वाभाविकै हो । हामीले यहाँका बाँदरलाई कुटेर धपाउने होइन कि माया गरेर सहजिकरण गर्नुपर्दछ ।
० यो समितिले भविष्यमा यहाँको मन्दिर र यो क्रियापुत्री भवनलाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि केहि गुरुयोजना पनि बनाउनुभएको छ कि ?
यहाँको मन्दिरका लागि जमिनको संरक्षण गरिसकेका छौं । मन्दिरको स्वरुपलाई पछिल्लो पटक पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा पूर्व अधिराजकुमार धिरेन्द्र शाहले एक लाख पच्चिस हजार दिनुभएको थियो । त्यहि बजेटबाट यो मन्दिर बनेको थियो । यो मन्दिरमा त्यस अघि चारवटा बुर्जा थिएन । मन्दिरमा मुसलमानहरुले काम गरेका थिए । त्यसैले उनीहरुले चारवटा बुर्जा बनाइदिए । अतः हामीले मन्दिरलाई पुरानै स्वरुपमा ल्याउनका लागि योजना बनाएका छौं ।
हामीले तत्कालै एट्याच बाथरुम नभएका दुईवटा कोठामा बाथरुम बनाउनु पर्ने भएको छ । यहाँको साथै चार रोपनी जग्गा दिनका लागि गुठी संस्थानसँग कुरा पनि गरिरहेका छौं । उक्त जग्गा हाम्रो समितिलाई दिएको खण्डमा नर्सरीमा परिणत गर्नेछौं । किनकी पशुपतिमा दैनिक पुजा गर्न प्रशस्त फूल चाहिन्छ । साथै राम्रो पार्क पनि बनाउँछौं । पार्कमा उत्पादन गरिएका फूलहरुका कारण स्थानीयहरुलाई स्वच्छ हावा खाने रमणीय ठाउँ बनाउँदै छौं । तथापि संस्थानले व्यवसायिक रुपमा मात्रै खोजेको हुँदा अझै सम्भव भएको छैन । हामीले त जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित मात्रै गर्नेे छौं ।
० यहाँ क्रियापुत्रीलाई भेटघाटको लागि आउनेहरुका निमित्त पाकिङको पनि त समस्या देखियो नि ?
वास्तवमा यो मात्रै साढे दुई रोपनी क्षेत्रफल र त्यसैमा पनि भिर पहरा भएको हुँदा जग्गालाई भरमग्दूर सदुपयोग गर्ने क्रममा पार्किङ निकाल्न सकेका छैनौं । पाकिङका लागि धोबिखोला करिडोरको साइडमा व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौं । साथै हाम्रो अगाडिको भागमा ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा एकलाइन पार्किङका लागि लिएका छौं । त्यसैले केहि सहज भएको हो ।
० त्यसका लागि बजेट पनि तर्जुमा भइसकेको अवस्था छ ?
पुरानो मन्दिरको नक्सा हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैले पुरातात्विक ढंगले नै बनाउन लागिरहेका छौं । त्यो निमित्त योजना बनाएका छौं । प्राविधिकसँग बसेर छलफल गरी काम अगाडि बढाउँदै छौं ।
० यहाँको मन्दिर लगायत क्रियापुत्री भवन र अन्य संरचनाहरु भूकम्पिय दृष्टिको सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
२०५८ सालमा यो संरचना बनाउँदा जग हालिएको हो । त्यो समयमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने थिएन । तथापि २०७२ साल वैशाखमा ठूलो बिनासकारी भूकम्प आएको समयमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा विर बहादुर कार्की नामका इन्जिनियर हुनुुहुन्थ्यो । उहाँ पहिला भन्डारेश्वर मन्दिर हेर्न आउनुभएछ । तर, यहाँ केहि पनि भएको थिएन । ‘उहाँलाई स्थानीय जनताले दिएको पैसाबाट राम्रो र बलियो भवन बनाएका रहेछौं भन्ने लागेछ’ । अहिले पनि यो भवनलाई माथिल्लो तला थप्नका लागि धेरै दाताहरु आउनुभएको थियो । तर, हामीले निर्माण गर्न दिएनौं । किनकी बढि ‘भार’ बनाएर जोखिम मोल्नु पनि भएन ।
० धार्मिक क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउनका लागि बिभिन्न खालका दाताहरु आउने गर्छन् । त्यस प्रकारको दाताहरुको प्रवेश रोक्नका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
हामीले दाताहरुको सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड नै तयार गरेका छौं । सकभर दाताहरुको पैसा नै लिदैनौं । काम आफै गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गछौं । हाम्रो स्थानीय समितिले त्यसको अनुगमन गर्दछ । यसरी दाता स्वयं नै आएर काम गर्दा उहाँहरुमा पनि सन्तुष्टि मिल्छ र हाम्रो पनि गुणस्तरीय काम हुन्छ । यसै कारण पनि हाम्रा दाताहरुको सहयोग सहज भएको हो ।
० संघ संस्थाहरुका सुरुवातमा मानसिक र शारीरिक श्रमका साथै आर्थिकको पनि आवश्यकता पर्दछ । तर, जब संस्था राम्रो र विश्वसनीय बन्छ । समिति भित्रैबाट खुट्टा तान्ने र नेतृत्वलाई असफल बनाउने होडबाजी चल्छ नि ?
हामी कहाँ त्यस प्रकारको प्रवृति छ भन्ने लाग्दैन । हामीले काम गर्ने क्रममा छलफल नगरी एकल निर्णय गर्दैनौं । त्यहि शैलीका कारण पनि यो परिस्थितिबाट मुक्त छौं ।
० अन्तमा थप केहि भन्नु छ कि ?
यो समितिले धर्म संस्कृतिका लागि काम गर्न खोजिरहेको छ । त्यसमा हामीहरु स्थानीयहरुको साथ सहयोगबाट मात्रै यो स्थानमा आइपुग्न सफल भएका हौं । यो नै संस्थाको ठूलो सम्पत्ति हो । यसलाई अझ वृहत बनाउनका लागि तपाईहरु सञ्चार माध्यमको पनि ठूलो भूमिका छ । साथै यो संस्थाका बारेमा उजागार गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसबाट संस्था गन्तव्यमा पुग्ने छ । साथै खोजेको विषय पनि प्राप्त हुनेछ । साथै, लक्ष्यमा पुग्न पनि थप सहज हुनेछ ।
Previous जनतालाई देखाउने खालको काम गर्ने योजनामा लागि परेका छौं प्रमुख, कागेश्वरी मनोहरा
Next चैत्र देखि रोकिएको विद्यार्थीहरुको पढाई हाम्रो नगरपालिकामा असोज ११ देखि २५ गतेसम्म पहिलो ट्रायल अन्तर्गत सञ्चालन गरिँदै छः नगरप्रमुख
न्याय क्षेत्रमा ग्रहण लाग्नुका साथै पैसामा विक्री भएको छ : आमरण अनसनकारी अम्बिका अधिकारी
भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट न्यायाधीशलाई नै चाहन्छन्
पुराना पिढीका कांग्रेस नेताका सन्तानहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा आएका हुँदा मलाई भोट दिनेछन्
3 hours ago E-Diary Express
6 days ago E-Diary Express